अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर ! – AB Sansar
अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर !
November 1, 2020 adminLeaveaComment on अब खाजा खाने पैसाले घर किन्नुस् ! १३८ रुपैयाँमा पाइन्छ पूरै घर !
काठमाडौं। मानिसहरुलाई एउटा राम्रो घर किन्न जीवनको अधिकांश कमाइ खर्च गर्नुपर्छ । जीवनभरको कमाइले घर किन्न नसक्नेहरु पनि धेरै छन् । तर, युरोपेली देश इटलीमा भने मात्रै १ युरो अर्थात १३८ नेपाली रुपैयाँमा सिंगै घर किन्न पाइएको छ । इटलीको सिसिली प्रान्तमा रहेको एउटा सानो शहरमा यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ । यो शहरको नाम सलेमी हो । यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिँदैछ भन्ने कुरा विश्वास गर्न निकै कठिन हुन्छ तर यो सत्य हो । र, यहाँ यति सस्तो मूल्यमा घर बेचिनुको पछाडि खास कारण छ । **** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
सीएनएनको एक रिपोर्टअनुसार पछिल्ला केही वर्षहरुमा यहाँका साना साना बस्तीहरुमा जनसंख्या निकै तब्रि रुपमा घटिरहेको छ । यही कारण यी साना बस्तीहरुमा यति कम मूल्यमा घर बेचिँदैछन् । यो शहरका मेयर डोमेनिको भेनुटीले सीएनएनलाई बताएअनुसार यी सबै घरहरु सिटी काउन्सिलका हुन् र पछिल्लो अफरले यहाँका घर बिक्रीमा तीब्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ । यहाँका घरहरु बिक्री गर्नको लागि सडक, विद्युत, पानी, ढलनिकास जस्ता आधारभूत सुविधाको मर्मत गरी सुधार गरिएको छ ।
विगत केही वर्षयता इटलीका कैयौं शहरका नागरिकहरु पलायन भइरहेका छन् र यसरी नागरिक पलायनको अत्याधिक मारमा परेको एक शहर सलेमी पनि हो । बिक्री गर्न लागिएका घरहरु यहाँ पहिले बस्ने बासिन्दाहरुले माया मारेर त्यसै छाडेर गएका घरहरु हुन् । यहाँका बासिन्दाले पलायन हुने क्रममा छाडेर गएका सम्पत्ति बेच्न पहिले नै कठिनाइ भइरहेका बेला अहिले कोरोनाभाइरसको म हा मारीले झनै कठिनाइ थपेको छ ।**** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला****
कुवेतमा अरुसँग प्रेमसम्बन्ध रहेको आ शं’कामा भारतीय युवकद्वारा नेपाली प्रे’मिकाको ह’त्या”
श्रीमतीलाई बि’ग्रीन नदिन ध्यान दिनुस यी कुराहरुमा: विवाहितले पढ्नै पर्ने !
December 5, 2020 December 5, 2020 Ab-संसार
भगवानलाई जल चढाए कोरोना भाग्ने हल्ला फैलिएपछि जे भयो …..
बिरालोले दुई बच्चालाई बचाउने क्रममा गुमायो ज्यान, दुनियाँको सबैभन्दा विषालु सर्पसँग एक्लै भिड्यो
February 17, 2021 Ab-संसार
चीनको अनियन्त्रित रकेट पृथ्वीमा खस्ने खतरा, जसले बनाउने दैनिक जीवनमा अस्तव्यस्त May 8, 2021
युएईको अस्पतालमा जमेका नेपाली डाक्टर May 8, 2021
बिरामि आमा जो भोकभोकै बाचिराख्नुभएको छ ,खानलाई केही पनि छैन ,सहारा कोहिपनि छैनन् ,धुरुधुरु रुनुहुन्छ ,कठै आमा (हेर्नुस् भिडियो ) May 8, 2021
बाँकेमा कोरोनबाट ३ घण्टामा ५ जनाको मृत्यु May 8, 2021
निजामती कर्मचारी, सेना, पुलिस, शिक्षक लगायतलाई खुसीको खवर ! May 8, 2021